nokulingana masheya 'kule-balance sheet ibonisa kokuthola lezi zimali, iminikelo kwabanikazi bamasheya, inhlokodolobha eyengeziwe kanye inzuzo. Inani layo kungenzeka kushintsha njalo. Ngesikhathi besanda kuqala, lapho kumiswa inkampani kuphela, it has a umthombo eyodwa uxhaso - abasunguli iminikelo.
Cabanga ukulingana ezindaweni balance sheet njengesibonelo yezindlela eyinkimbinkimbi kunazo - JSC. Ngo okuhlangene isitokwe izinkampani babe umthombo obengeziwe nokulingana dolobha. Ayisatholakali Ltd, nezinye izinhlobo IP. JSC unelungelo ukukhipha nokwabelana. Charter Inkampani kusengaphambili ezibekwe isamba okungaba umphumela walokho ukwakha lezi izibambiso. Kodwa ngokuvamile AO akusho ukukhipha amasheya ukubaluleka konke lokhu ngesikhathi esisodwa. Ibhalansi ubonisa lemali lapho inhloko-dolobha share isivele ikhokhwe. Ngokushesha nje indaba yokufuna ukwaba okusha, ukubaluleka esithwele capital inyuka ngo inani ukubaluleka bokuzisholo. Kodwa ukukhula akusho ngaso sonke isikhathi kwenzeke ukuthi lemali. nokulingana masheya 'kule-balance sheet kuyehla uma inkampani iqala lokuhlenga ukwabelana lalo. Isamba ke kubonakala nezikweletu sigaba. Masheya ukutshala izimali zabo inkampani isitokwe, okungukuthi, kunjengokungathi ukunikeza loan. Kodwa ngenkathi zimali co-abanikazi inkampani. Umninimasheya unelungelo ukuba lithengise ukulondeka okuphelele, kodwa awukwazi asibuyisele inhlangano.
Ngakho, imithombo izimali zabo ku-balance sheet ziyabonakala ku "izikweletu" sigaba. Cabanga ngalokho izimali akuhlobene yokuhwebelana, kusengenzeka kube amafemu.
isabelo-premium - umahluko phakathi intengo yamasheya kanye ukubaluleka lapho ke seyenziwe;
inhlokodolobha eyengeziwe - lemali ukuthi ngokuqinile uthola kusukela ukudayiswa kwempahla yayo ngentengo ephakeme noma yokufuna namanye amafa i-ngingalokothi ngiwathathe kalula;
iminikelo ngezikhathi ezithile kunoma yiluphi uhlobo: impahla, imali kanye nezinye.
nokulingana masheya 'kule-balance sheet futhi kubonisa ingxenye yenzuzo kwenhlangano. Lapho SA uthola iholo net, bese iyifaka ukuphuma izinzuzo zimali salo. I inzuzo esele ngemva kwalokhu, kukhona nokwanda nangekhono.
Njengoba ukulingana ezindaweni balance sheet kubonakala okwamanje? Umugqa "Capital izinqolobane" libhekisela lemali yemali lengenako enzuzweni lenkhulu, esiklanyelwe ukukhomba izindleko. Inkampani kufanele adale zigcine ezinjalo. Kulokhu, umthetho intela inikeza eziningana izinzuzo. Banakekelwa yemali. Izixazululo kusukela kulesi sihloko ukuya update ka fixed capital, ukumboza umonakalo ahlukahlukene, ukulahlekelwa, njll Leli lungiselelo kunqunywa ukuphathwa kwenkampani kanye ezimele isimo enhlanganweni okwamanje. Okusho ukuthi, uma esikhathini esizayo esiseduze inkampani kungenzeka uthole ukulahlekelwa ethile ehilela ingozi, bamasheya isinqumo ukwaba isamba for umshwalense.
Ingxenye ethi "Kwenzeka nokulingana masheya '" kuhlanganisa lokhu okulandelayo balance sheet imigqa:
inhlokodolobha ezengeziwe. Lokhu kubonisa ukubaluleka amafa ukuthi inhlangano lithole isinxephezelo. Uma inkampani othenga ukwabelana ngentengo ngenhla par, umehluko futhi ahlobene kokusele esigabeni;
agcinwayo Amaholo. Lena imali ukuthi inkampani ithole kusukela buqala, net izinzuzo, ukulahlekelwa kanye capital izindleko ezihlukahlukene;
ukulungiswa we revaluation kwempahla. Inani ukwanda noma ukwehla enanini amafa ukuthi ziphethwe inkampani;
exchange umehluko ku ukuthengiselana ezihlobene ethengiwe noma ukuthengiswa currency angaphandle;
iqoqo kwemali kanye ngezimali. Lena i-akhawunti ivulekile ngesikhathi. Iqukethe isamba sazo zonke uzuza kanye nezindleko ukuze uthumele nabo emgqeni "engenayo Net" futhi "yemali lengenako enzuzweni lenkhulu".
Yonke izindleko nokulingana ezishiwo ibhalansi esigabeni sesithathu. I emikhulu njengoba linjalo, njengeliyiZwi isikhundla uzinze lenkampani.
Electronic Document Management System (Edms) ukuthi izici ezifana kanye nezincomo
"Bastion": brandy evela eFrance ngo-umkhiqizi Russian